Taariikhda My Butros » Six Flags Red kaalinta maalinta ugu horeysa ee
Marka ay timaado in maalinta koowaad, waxaa jiri kara cadaadis aad u hareereysan. Maxaa inay xirtaan, halkaas oo ay u tagaan oo xitaa waxa ay ka hadlaan. Waxay dhammaan u noqon kartaa yara xad-dhaaf ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dabeecado dhowr aad u muhiim ah in aad waa in uu feejignaadaa ee maalinta ugu horeysa ee. Waxaan ka hadleynaa calaamadaha digniinta calanka gaduudan ka Digtoonaayeen.
Waa wax la garan ay u noqon nervous maalinta ugu horeysa ee, sidaas Ma dhahayo waa in aad u fiirsato xukun iyo dhaqdhaqaaq kasta oo taariikhda ka dhigay, laakiin waxaa jira mawjadaha arin wayn yar in ay raadineysay.
Qoraal lagu guda jiro Date ah
Waxaan fahamsanahay hadda aan ku nool nahay bulsho culus technology a, laakiin kaliya telefoonka fogeeya. Qoraal lagu jiro taariikhda ay tahay oo keliya sida uu farta dhexe u qallafsan. Wax ka dhigaysa qof dareemaan inay aad u uninteresting in ay dhegeystaan ​​badan qorid inta aad taariikhda yihiin. Qoraallada in aad saaxiibadaa la sugi karin dhowr saacadood. Sidaas marka aad madaxa ka maqnaan taariikhda in marka hore, gelin aad telefoon ku aamusan oo u daaya in aad jeebka ama boorsada inta ka dhiman taariikhda. Haddii aysan awoodin inay dhigay ay telefoonka iska dhigno maalinta ugu horeysa ee, ay u badan tahay in marnaba hoos u dhigay doona phone.
Too Galmada xad gudubku
Waxaa jira farqi u dhexeeya isagoo flirty oo la galmada ka soobaxa. Samaynta faalllooyin dhowr ah oo aan waxba galabsan waa ganaax (sida kooban u dhammaystira aad ka dhisan ama muuqaalka), laakiin haddii la bilaabo in la sameeyo comments dheeraad ah oo laga xishoodo, waa in aad qiimeyso taariikhda. Qof walba jecel yahay in la dhameystirey, Si kastaba ha ahaatee cid wax ka haabhaabtaan lugtaada iyo aad u sheegto sida xun ay rabaan in ay guriga kuu kaxeeyo waa uun raaxo. Haddii aad raadinayso xiriir muddo dheer ah, aad rabto taariikh loo kuwaas oo isku dayaya in ay helaan in aad taqaanid iyo kuma koobna oo kaliya inaad sariirta.
Waxaa marnaba calaamad fiican haddii taariikhda ayaa kaliya ku bilowday oo isagu / iyadu ay mar hore aad dhaleeceeyay. Tusaalooyinka: haddii aad ka timid gym ah iyo u sheeg taariikhda waxa kale oo jira jawaabta waa wax la mid ah "Oh, si aad noocaas ah qofka. Total rat gym?"Ama marka aad timaadid inaad la kulanto taariikhda ay qiimeeyaan waxa aad soo xirtay. Haddii ay kuu this dhaleeceeyay hore ku, waxay u badan tahay in qaab ahaan uu socon doono iyo wuxuu noqon doonaa joogto ah ku xukumayn ee doorashooyinkaaga.
Hadalka Way aad u badan ka jabo
Wada hadal wanaagsan sida caadiga ah waxay ka kooban tahay is dhaafsi si siman wadaago. Sidoo kale waxaa jira waqtiyo ay tahay haddii adiga ama taariikhda xishoone, mid ka sii tagaya laba idinka mid qaadi doono wax ka badan oo wadahadalka, taas oo ganaax. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay taariikhdii ugu horrayn wada hadal hal dhinac, halkaas oo aad si joogto ah taariikhda hadlayaa naftooda ku saabsan, waxa uu noqonayaa mid ka yara dhib iguma. Kaba sii daran, marka ay aad u gooyay marka aad hadlayay in ay ka hadlaan in ka badan naftooda ku saabsan. Taariikhda A waa fursad lagu barto badan oo ku saabsan kasta oo kale oo ay arki doonaan sida aad ku xidhi, ma fursad u la metalayo oo ku saabsan sida loo cajiib ah oo kaamil ah aad tahay.
Shaqada iyo Living Xaaladda
Ma dhahayo in aan shukaansi qof oo ku nool guriga iyo shaqo la'aan-dhaqaalaha waa adag maalmahan, waa la fahmi karaa. Haddii aan, waxay lahaayeen ayaa dakhli lagu tashan karo muddo sanado ah oo u muuqdaan kuwo wax yar oo aad u raaxo leh nadaamkooda ku nool guriga waalidka ee, laga yaabee waa in aad u guurto on. Waa inaad sidoo kale ka welwelin haddii ay kari waayaan in ay kuu sheegaan waxa ay dhab ahaan waxay u sameeyaan nool a. Waa maxay sidaa qarsoodi ah oo ku saabsan shaqada aad in aadan awoodin in aad u sheegtid taariikhda? Ma laga yaabaa in aad rabto in aad ogaato jawaabta…
Iyada oo ay tani ka mid muuqan kara wax cad (taariikhda ugu horeysay marna waa waqti aad u weyn in ay ka wada hadlaan xiriirka hore), haddii ay hore la keeno, fiiro gaar ah u sida ay ka hadlo waxa ku saabsan. Way fiican tahay, haddii ay u gaaban oo la sheego, laakiin haddii ay kuu sheegaan waxa uu nafsaani ah ay yihiin iyo inta ay iyaga neceb, run ahaantii aad ka waa in aysan qorshaynaynin taariikhda labaad. Sort kasta oo hadal wax weeraraya ama saxsanaanta, oo ku saabsan la-hawlgalayaasheeda ay ee la soo dhaafay ayaa muujinaysa in ay si cad aan ka soo dhaqaaqnay, xiriirka ama in ay kaliya khadhaadh iyo calool adag yihiin, oo markay arrinta sidaasi ay u fiican ee aadan sii wadi u arkaan.
5 Siyaabaha Raadi Love ee Your Life!